I-bungalow "La Bohème" - I-Airbnb
I-bungalow "La Bohème"
Indlu enevaranda yonke sinombuki zindwendwe onguDjema
UDjema ufumene umlinganiselo weenkwenkwezi eziyi-5 kwi-95% yeendwendwe zakutshanje.
I-95% yeendwendwe zakutshanje inike uDjema iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
i Bungalow "la Bohème" ngaba inobunzima abantu-4 ukuya kwezi-5, iye okulala amabini, nto leyo iquka ebhedini kabini kunye neebhedi ezimbini (100% zemifuno), nelinen ndlu inikwa, umandlalo kunye isitulo baby eliphezulu.
Kwigumbi lokuhlala, kukho i-sofa ye-Scandinavian convertible, i-TV (i-wifi) itafile, izitulo, ikhitshi elixhotyiswe nge-microwave, i-hob ye-induction, ifriji ye-vintage, umenzi wekhofi we-Senseo (ene-pods), i-kettle.
Igumbi lokuhlambela libanzi
Kwindlu evaliweyo nevaliweyo enendawo yokupaka eyaneleyo (mhlawumbi ukupaka , iimoto, iilori...), indlu enevaranda" la Bohème" ikwindawo eluhlaza kwiibhanki zaseSeine, ebiyelweyo, enobutofotofo bonke.
indawo efanelekileyo yokuphumla, ukunyuka intaba (Chemin du Halage), ukuhamba ngebhayisekile, ukuhamba imizuzu eyi-3 ukusuka kwiziko le-equestrian.
le ndlu inevaranda yimizuzu eyi-15 ukusuka e-Louen, imizuzu eyi-5 ukusuka e-Lake Bedanne, imizuzu eyi-5 ukusuka kwiziko elikhulu lokuthenga e-Tourville la Rivière
isidlo sakusasa esimnandi (esenziwe ekhaya, esidlo sakusasa nesasemini) siqukiwe kuphela ngeempela-veki nangeeholide.
Indawo eIdyllic, elunxwemeni lweSeine, enehoko yeenkukhu ekufutshane, iibhokhwe, iigusha kunye nemithi yeziqhamo.
Indawo emnandi nethuleyo
Umbuki zindwendwe ngu- Djema
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Oissel